Amanzi ngesisekelo eziphilayo eplanethini yethu. Le into kuvamile emhlabeni futhi iyingqayizivele ngempela. Kusukela amanzi kuleyo ndawo ukuphila kuzo zonke izinto eziphilayo, kuba medium lapho zamakhemikhali kudingekile ekuphileni. Libuye ketshezi luba umhlanganyeli kwamanye izinqubo yezinto eziphilayo.
Emvelweni, kungekho manzi okumsulwa ngokuphelele. Iqukethe ukungcola ahlukahlukene ukuthi uyifake kusukela imvelo. Ngo emifuleni kanye amachibi ukubaluleka solutes afika ku 0.1%, futhi ezilwandle nakuzo izilwandle - 3.5%.
Ukuze lokhu ayinto ebaluleké iyatholakala ukusetshenziswa, zikhona izindlela ezahlukene umshini ohlanza amanzi. The main wabo ngokusebenzisa filtration izingqimba elinama ukungena nakwamanye amazwe elingasebenza njengesibuko amalahle, ubumba calcined, amatshe noma isihlabathi, okuvumela ukuba balahle izinhlayiya okwesikhashana kanye ngobuningi amagciwane.
Ukuze uvimbele amanzi emifuleni noma emachibini yawela uhlelo amanzi, it is kushintshwe elidingekayo. Le nqubo ezenzeka ezitshalweni ukwelashwa indle. Ukususwa izinhlayiya okwesikhashana, okuvumela ekhanyisa ezishintshe umbala, kanye ketshezi libizwa coagulation. Ngaphansi kwethonya reagents ekhethekile okungase bakhonze njengamaphayona izinto amaminerali kanye polymers, ababambelela kwezinto eziqinile kwenzeka ngesimo ishq. Khona-ke amanzi luhlala, bese-ke kuphinde kuhlungwe. Kuphethe inqubo decontamination wenziwa kwalokho chlorine ngesimo lime. Ingase futhi esimweni liquid. Futhi kungenzeka ukusebenzisa i-ozone.
izindlela umshini ohlanza amanzi yamanje uvumele decontamination ezivela emithonjeni komhlaba usebenzisa imisebe ultraviolet. Fluoro, sokuthi idlula Ukucaciswa, okukhipha isihlungi ehlanganisa alumina isebenze.
izindlela Amanzi nokuhlanzwa uvumele ukuqeda izinhlayiya enemisebe. Ukuze wenze lokhu, afeze ukungaqaliswa. Ukuze akhiphe amanyela, enika umbala ezingadingekile futhi iphunga, deodorization Kwenziwa. Le nqubo ibizwa eyenziwa usebenzisa i-ozone namachibi potassium permanganate noma chlorine dioxide. Libuye sorption okungenzeka carbon isebenze.
umkhakha Modern ukhiqiza ezihlukahlukene zomculo ukuthi uvumele, usebenzisa amanzi kampompi ukuthola umkhiqizo kangcono. Lezi zihlanganisa izihlungi kokuba isigaba eyodwa inqubo. Zitholakala njengoba nezinamathiselo ku le isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu noma kwemiphanda leyo. injongo wabo ukususwa chlorine ne ukungcola ahlukahlukene. Izindlela zokuhlanzwa amanzi okuphuza, lapho zinsizakuphila zisekelwe nokugcinwa kwezinto eziqinile imiswe element zokuhlunga. Nokho, umthombo izidakamizwa replaceable incane kakhulu. Yena yisilinganiso sesifundo 400 amalitha.
amabili amanzi ekwelapheni izindlela, kanye isihlungi ezintathu isigaba ungakwazi balahle yensimbi, imithi yokubulala izinambuzane, chlorine, ukudla okuqinile, kanye nosawoti kanzima. Cartridges eziqukethwe lezi zinsimbi ukukhiqiza imijikelezo eziningana ngokuletha amanzi epayipi kuya elidingekayo. Ngo sokuqala yokuhlanza mechanical wenziwa, kwesibili - uhlanzekile esebenzisa i-carbon isebenze. Uma usebenzisa isihlungi ezintathu isigaba is ngaphezu kwalokho wasebenzisa ion exchange resin noma i-carbon isebenze okuyinto ahlanganiswe izithasiselo ehlukahlukene.
izinga Iningi ezimweni yokuhlanza yasekhaya bungatholakala usebenzisa indlela Osmosis reverse. It ivumela amanzi zezimoto nitrites futhi i-arsenic, asbestos, fluorine, chlorine, nensimbi, zonke amagciwane namagciwane, magnesium mercury kanye nitrate. izihlungi ezinjalo aqukethe mineralizers ultraviolet isibani. Lezi amadivayisi babe ukusebenza high, ngaphezu, zingabantu compact, okuyinto ebaluleke lapho lusetshenziswa ekhaya.
Izindlela umshini ohlanza amanzi usebenzisa izihlungi ulwelwesi, uvumele ukususa ukudla okuqinile ayetholakala okwesikhashana, kanye manganese, i-arsenic, i-mercury, insimbi, esindayo zensimbi. Ukuphungula amadivayisi okunjalo futhi kusukela lamagciwane.
Imithetho yokudla ukudla okunempilo
Selenium e imikhiqizo - isiqinisekiso impilo nokuphila kade.
Bewazi yini ukuthi ukunikeza izingane ukuhlanza?